समाचार - एन्जिल गारमेन्ट सहायक उपकरण कं, लिमिटेड
विरोधी नक्कल धागो बुने लेबल किन हेम गरिनु पर्छ?
केही ग्राहकहरु सोच्दछन् कि बुनिएको मार्क वरिपरि लकहरू पनि छन्। वास्तवमा, यो गलत बुझाइ हो। बुने लेबल किनारिएको छ, जुन पछि थपको प्रक्रिया हो। हेम्मिaसिलाउने विधि हो जुन लेबलको किनारा वा बटनहोल बुन्न प्रयोग गरिन्छ।
ज्याकवर्ड रिबन जैकवर्ड रिबन प्रक्रिया परिचय के हो
रिबन तीन-आयामिक उत्कृष्ट, जैकवर्ड प्यारा टिकाऊ घर्षणको उपस्थिति पछि, विरूपण कहिले हुँदैन। .अद्वितीय ढाँचा ज्याक्वर्डले उत्पादको सौन्दर्य र भिन्न डिजाइन प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछ, र डिजाइनरको डिजाइन अवधारणालाई पनि हाइलाइट गर्दछ। उत्पादन परिचय: ढाँचा संरचना अधिक जटिल छ र जैकवर्ड रिबनको लागि ढाँचा वा पाठ......
वेबिंगको गुणस्तर कसरी छुट्याउने?
वेबिंग ईन्डस्ट्रीमा धेरै प्रकारका वेबिंगहरू छन् जुन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरू जस्तै कपडा, ट्रेडमार्क प्रिन्टि,, जुत्ता सामग्री, सामान, उद्योग, कृषि, सैनिक आपूर्ति, र यातायातमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
कपडाका सामानहरू वेबिंगको रye्गाउने प्रक्रिया
यहाँ टेक्सटाईल रिबन रंगका लागि दुई मुख्य तरिकाहरू छन्। एउटा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने रye्ग (परम्परागत रye्ग) हो, जुन मुख्यतया रसायनिक डाई समाधानमा कपडा रिबनको उपचारको लागि हुन्छ। अर्को विधि भनेको पेन्ट प्रयोग गर्नु हो जुन कपडाको लागि सानो अघुलनशील र colored्ग कणहरूमा बनेको हुन्छ। (फाइबर कच्चा पदार्......
सामान्यतया प्रयोग हुने वेबबिंग सामग्रीहरूको पहिचान विधिलाई जलाउने:
वेबिंगको रंग स्थिरता कसरी वर्णन गर्ने? वेबिंगको रंग स्थिरताको लागि परीक्षण मानक